छोरीलाई बलात्कारबाट जोगाउन नसक्ने मेरो देश ! – Rastriyapatrika
छोरीलाई बलात्कारबाट जोगाउन नसक्ने मेरो देश !
काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशमा बलात्कारको घटना कहालीलाग्दो ढंगबाट बढिरहेको छ । बलात्कारको घटना आज नहोस भन्ने कामनाका साथ म बिहान उठछु । यसो मोबाइल हेर्छु अनि सामाजिक सञ्जाल लग इन गर्छु तर यसमा बलात्कारको समाचार नै बढी पढ्नु पर्ने नियति दोहोरिदो छ । यी घटनाले मन भरी डर बोक्दै घरबाट निस्कन्छु । जतिखेर पनि मनभरि बलात्कारको डर बोकर कार्यलय आउछु ।
अफिस आउछु त्यही बलात्कारकै समाचार तयार गर्नु पर्ने पीडाबोध थपिदो छ । सडकमा बलात्कारविरुद्ध कडा कानूनको माग चर्कदो छ तर पनि बलात्कारको घटना रोकिने कुनै संकेतहरु देखिन्न । कहिलेकाँही दिक्क लाग्छ किन म यो देशमा जन्मिए । किनकी बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सरकारले न्यायको अनुभूति गराउन सकेको छैन । म, निर्मला पन्त,सानी नाबालिका, महिला वृद्धमा के फरक छ र ? म पनि नेपालकी छोरी उनीहरु पनि । उनीहरु बलात्कार हुनु भनेकै आफु स्वयम बलात्कृत भएको महसुस गर्छु । त्यसैले जवसम्म उनीहरुले न्याय पाउदैनन् तवसम्म मैले पनि न्याय नपाएको जस्तै हो । यस्तै देशभर ठूलो रुप लिएको घटना अहिले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनालाई लिइएको छ ।
तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अपराधि पत्ता लगाउन सकेको छैन । जस कारणले निर्मला तड्पिरहेकी छिन् र उनको आत्मा भड्किरहेको छ । न्यायको जति भिख मागे पनि उनको परिवारले त्यो पाउन सकेका छैनन् । सरकारले कहिलेसम्म यसरी तडपाउने हो त्यो थाहा छैन । निर्मला पन्तले कहिले न्याय पाउने यसको अत्तोपत्तो छैन् । पन्तकी आमा बाबु आफ्नो छोरीको हत्यारालाई सजाय दिन माग गर्दै रात दिन रोइरहेका छन् । देशका कुनाकाप्चाबाट पनि निर्मलाई न्याय दिनु पर्ने माग निरन्तर घन्किरहेको छ । सरकारले पनि प्रयास नगरेको त होइन तर घटनाको चुरोसम्म पुग्न सकेकै छैन् । जस्को कारण सरकार पनि चर्को आलोचना खेप्न विवश भइरहेकोे छ ।
निर्मला जस्तै धेरै बालिका, किशोरी, महिला र वृद्ध बलात्कारको शिकार बनिरहेका छन् ।देशमा जव सम्म बलात्कारीलाई फाँसी जस्तो कडा सजाय बन्दैन तव सम्म देशका छोरीहरु बलात्कारबाट बच्न सक्दैन । यो यथार्थलाई अब स्वीकार्ने बेला भएको छ सरकार । निर्मला पन्त हत्याको छानविनमा लापरवाही गरेको आरोपमा सरकारले नेपाल प्रहरीका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई कार्तिक १० गते बर्खास्त ग¥यो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा यो विषयलाई लिएर देशभर विरोध भयो ।सरकारको यस्तै निर्णयले पनि जनाताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै निर्मला पन्त जस्तै बलात्कारको शिकार बनेका धेरै अन्य छोरीहरु पनि यही देशमा छन् । बलात्कारीले नाबालिका र वृद्धलाई समेत छोडेको छैन् । छोरी भएर जन्मनु अभिशाप सरह हुन थालेको छ ।